उद्योग र व्यापारमा संवैधानिक अन्तर्विरोध : संघ र प्रदेशमा कस्को भूमिका कस्तो ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण उद्योग र व्यापारमा संवैधानिक अन्तर्विरोध : संघ र प्रदेशमा कस्को भूमिका कस्तो ?
on: March 14, 2019 लेख | दृष्टिकोण
उद्योग र व्यापारमा संवैधानिक अन्तर्विरोध : संघ र प्रदेशमा कस्को भूमिका कस्तो ?
वर्तमान संविधानले तहगत सरकारलाई उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थापन गरेको छ । कतिपय अधिकार संघीय सरकारको अधीनमा राखिएको छ भने कति अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । साझा सूचीमा पनि यस्ता अधिकारहरू परेका छन् । साझा अधिकार सूचीका सरोकारहरूमा अन्योल बढी देखिएको छ । त्यसमा प्रयोग भएका शब्दावलीले अन्योललाई झन् बढाएका छन् । विकासको उद्देश्यमा पुग्न अधिकारको तहगत बाँडफाँट गरेकाले नयाँ परिवर्तन चाहेको देखिन्छ । तर, उल्लिखित वैधानिक अन्योलले उद्योग व्यापारलाई सोचे जसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छैन । लगानीकर्ता अन्योलको अवस्थामा काम गर्न अग्रसर हुँदैनन् ।
उद्योग क्षेत्रका अन्योल :
संविधानले अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको छ । तर, यो अनुसूचीमा उद्योग भन्ने शब्दावली कतै पनि देखिँदैन । संघीय सरकारले उद्योगसम्बन्धी अधिकार आफूमा राखेको छैन कि भन्ने भान हुन्छ । प्रदेशको अधिकार उल्लेख गरिएको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २० मा औद्योगिकीकरण र कलकारखाना भन्ने शब्द परेको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको अनुसूची ७ को क्रम संख्या १५ मा उद्योग र २१ मा औद्योगिकीकरण लेखिएको छ । यसबाट कानून निर्माणमा संघ र प्रदेशबीच तानातानको अवस्था हुन सक्छ । अनुसूची ५ हेर्दा प्रदेशलाई उद्योगको अधिकार आफ्नो हो भन्ने पर्नु अस्वाभाविक होइन । अर्कातिर साझा अधिकार सूचीमा पनि यो परेकाले संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रमा विवादको कारण बन्न सक्छ । संविधानको धारा १०९ ले संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकारमा अनुसूची ७ लाई उल्लेख गरिएको छ । यसले उद्योगसँग सरोकार राख्ने कानून बनाउने भन्ने हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, उद्योगका नियम कानून संघले बनाउने कि प्रदेशले ? संविधान कार्यान्वयनमा आएको साढे २ वर्ष हुन लाग्यो । उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानूनहरू संघीय व्यवस्थापिकाले बनाइरहेको छ । पुराना कानूनको संशोधन र प्रतिस्थापनका काम धमाधम भइरहेको छ । आसन्न लगानी सम्मेलनलक्षित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् । प्रदेशले पनि उद्योग र व्यापारलाई लक्षित गरी कानून बनाउन थालेका छन् । दुईतर्फी कानूनको औचित्य के हो ? यसले विधायिकी अधिकारको उपयोगमा विरोधाभाससँगै लगानीकर्तालाई कुन तहको कानूनका आधारमा लगानी ल्याउने भन्ने अन्योल बढाएको छ ।
उद्योग सञ्चालनको अर्थ संरचना निर्माणमात्र होइन । मानव संसाधन र प्रविधि मुख्य कुरा हो । ट्रेड युनियनका कुरा संघ र प्रदेशमा परेको छ । तर, कानून संघले बनाएको छ । उद्योग टाट पल्टिएको अवस्थामा के गर्ने ? यसको स्पष्ट र सहज कानूनी निकास हामीकहाँ छैन । बाहिरबाट लगानी नआउनुको मुख्य कारणमध्येको यो पनि एक हो । औषधि, विषादी चलचित्र, पेशा लगायत विषय संघ र प्रदेशको साझा अनुसूचीमा छन् । यसको अधिकांश अंश केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेशलाई खासै अधिकार दिइएको छैन । त्यसो भए प्रदेशको अधिकार र भूमिका के त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रदेशले भन्दै आएका कुराहरूको कानूनी आधार के हो ? यसमा प्रदेश स्वयम् त्यति संवेदनशील भएको छैन ।
हामीकहाँ एकद्वार निकायबाट अनुमति लिएर चलेका बैंकिङ र बीमाक्षेत्र फस्टाएको छ । उद्योग र अन्य क्षेत्र, जसमा अनेक निकाय जोडिएकोमा सोचेजति प्रगति छैन । प्रक्रियागत झमेलाले लगानी प्रोत्साहित भइरहेको छैन । वर्षौंदेखि कुरा भएर एकद्वार हुन सकेको छैन । कानूनमै तोकिए बाहेकमा अनुमति नचाहिने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा अनुमति लिनु परेको हुन्छ । दर्तामा अनेक झमेला छन् । हालै विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश सूचकमा नेपाल पछि पर्नुको कारण यो पनि हो । कतिपय देशमा २४ घण्टामा उद्योग दर्ता हुन्छ । तर, हामीकहाँ महीनौं लाग्छ किन ? उद्योगको अनुमति र दर्ता संघ र प्रदेश कुन तहमा जाने ? यस्तो अन्योलको निकास जरुरी छ ।
हामीकहाँ अझै पनि पूँजीको आधारमा उद्योग वर्गीकरणको परिपाटी छ । हामीलाई बढी पूँजीको उद्योग चाहिएको हो कि सानो पूँजीको घरेलु उद्योग चाहिएको हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सानो पूँजीमा आय, रोजगारी र राजस्व आय पनि सानै आकारको हुन्छ । तर, यस्ता उद्योगलाई संरक्षण धेरै चाहिन्छ । हामीले लगानीका आधारमा ठूला उद्योग भनेकालाई निकट छिमेकी देशमा सानो लगानी मान्न थालिएको छ । घरेलु उद्योग भनेको भवनात्मक विषय हो । औद्योगिकीकरण भावनाले चल्दैन । घरेलु शीपको जगेर्नाको कुरा हो भने करोडौं लगाएर उद्योग खडा गर्नु पर्दैन । ठूलो लगानी लगायो भने शीपको मौलिकता नै रहँदैन । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने उद्योगसँग यस्ता उद्योगले प्रतिस्र्धा गर्न पनि सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धामा आउन उत्पादन परिमाण र प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । गुणस्तर र मूल्यमा तुलनात्मक लाभका लागि ठूलो लगानीका उद्योग चाहिन्छन् । बढी लगानीका उद्योगलाई सुविधा र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको स्वरूप कस्तो हुने ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ ।
व्यापारका विरोधाभास :
अनुसूची ५ को क्रम संख्या १८ मा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई राखिएको छ । यसले वैदेशिक व्यापार संघीय सरकारको नीति नियममा सञ्चालित हुने बुझिन्छ । प्रदेश अधिकारको अनुसूची ६ को क्रम संख्या ११ र २० मा आन्तरिक व्यापार प्रदेश सरकारको जिम्मामा दिएको देखिन्छ । यस अधारमा दुई किसिमको कानून चाहिने भयो । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूचीको २ मा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरू हेर्दा कुन कुरा कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट छ । व्यापारका विषय आपसमा जेलिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार भनेको आयात र निर्यात दुवै हो । अधिकार सूचीमा उल्लिखित अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक व्यापारको कुराले आयातित मालसामानको बेचबिखन संघमा पर्ने कि प्रदेशमा भन्ने अन्योल हुन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयातित वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, ओसारपसार कसले हेर्ने ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
आयात बढ्नुको २ ओटा कारण हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुनै नसक्ने वस्तु, जस्तो कि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु परेको छ । हाम्रा उत्पादन महँगो भएर पनि आयात भएको छ । हामीकहाँ उर्जा, श्रम र पूँजी सबै महँगो हुँदा उत्पादनको लागत बढेको छ । जसले आयात अभिवृद्धि भइरहेको छ । सीमानामा असंगठित आयात पनि चुनौती हो । यो सम्बोधन नभएसम्म लगानी कसरी आउँछ ? उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भन्ने विषयलाई कानूनले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन ।
कुनै पनि लगानी प्रतिफलका लागि लगाइन्छ । यसमा प्रतिफल र जोखिमले खास अर्थ राख्दछ । जोखिम बढी भएर पनि प्रतिफल राम्रो भए लगानी आउन सक्छ । जोखिम व्यवस्थापन गरी नाफा लिन सकिन्छ । कति लगानीकर्ताले त्यसैलाई अवसर पनि मानेको हुन सक्छ । अफ्रिकी देशमा चिनियाँ लगानी यसको उदाहरण हो । तर, हामी कहाँ मुनाफालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने परिपाटी छ । नाफालाई सकारात्मक नठानेसम्म यो दृष्टिकोण पनि लगानीकर्ताका लागि जोखिम नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सुधार चाहे पनि कर्मचारीतन्त्र अनुदार छ । राजनीतिले ल्याएको उदारीकणले सन् २००० को दशकमा आर्थिक सुधार सम्भव भएको अनुभव हामीसित छ । पछिल्लो समय हामीकहाँ सरकारका अभिव्यक्ति र गतिविधिले यस्तो जोखिमलाई मलजल गरेको पाइन्छ । संघले प्रदेशलाई अधिकार नचाहनु पनि अनुदारको प्रकार नै हो । यसकारण समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन जरुरी छ । आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउन सरकारले सबैभन्दा पहिला परस्परविरोधी वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । लक्षित कानूनी व्यवस्थाहरू सहज बनाउनुपर्छ । अन्यथा यो सरकारका लागि विवादास्पद र लगानीकर्तालाई अन्योलको कारणमात्र बन्नेछ ।
उद्योगीलाई अब धेरै ठाउँ चहार्नु नपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रको उद्घाटन, निजी क्षेत्रलाई नैतिकवान हुन मन्त्री यादवको आग्रह